ရဲရင့်သက်ဇွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ပိတောက်တွေ ရွှေရည်လူး ဖူးကြပြီလေ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ နှင်းပွင့်တွေက မြေပြင်ပေါ်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်း ပြေးဆင်းလာကြတယ်…။ လေအဝှေ့မှာ အအေးဓာတ်က အရိုးထိအောင် ထိုးထဲ့လိုက်သလိုမျိုး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မြေပြင်ကတော့...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● အမှားနဲ့ အမှန်ခွဲခြား (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈ သမင်လည်ပြန် အကြည့်တချက်မှာ ညဟာ ဘဝများစွာကို သတိတရနဲ့မြိုချတယ်… ကံကြမ္မာကတော့ အမှတ်တမဲ့နဲ့ဘဝတွေကို...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● သိသလိုလို မသိသလိုလို (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၇ တကယ်ချစ်ခဲ့တာလား မချစ်ခဲ့ဘူးလား ဘုရားသခင်သိစရာမလို မင်းတယောက်ထဲသိဘို့လိုတယ်။ သစ္စာတရားဆိုတာကို တကယ်ယုံကြည်ခဲ့ကြတာလား မယုံကြည်ခဲ့ကြဘူးလား ဘုရားသခင်သိစရာမလို မင်းတယောက်ထဲသိဘို့လိုတယ်။ မွေးရာပါ ဝဋ်နာကံနာတခုလို...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ကြယ်တွေကြွေတယ်လို့ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ၁၂ လ၊ ၂၈ ရက်) ည တညလုံး တစ္ဆေတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေတယ်။ ငါ… ညကြီးသန်းခေါင် ထပြီးထိုင်နေ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● သွေးသစ္စာနဲ့ ရေးတဲ့သမိုင်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၊ ၂၀၁၆ ကောင်းကင်တခုလုံး မှုန်မှိုင်းရီ ဝေ ၂၈နှစ်တာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာမတွေ့ ဘူး မလိုမုန်းတီးမှုတွေဟာ အရိပ်လိုထပ်ကြပ်မကွာ အလိုတူခြင်းမတူခြင်းတွေကို ကျော်လွှား...
ရဲ့ရင့်သက်ဇွဲ – さようなら – ဆာယိုနာရား (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၆ ယုခိစံ တို့ ဘယ်လိုငြိတွယ်ခဲ့ကြသလဲ ပြန်စဉ်းစားဘို့ အချိန်ကို မင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီပဲ ..။ ဟောဒီပင်လယ်ကမ်းခြေကြီးမှာ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ကြွေသွားတဲ့ ပန်းသီးအပေါ်မှာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၆ ဖြတ်ခနဲဆို အာရုံက နယူတန်ရဲ့ ခေါင်းပေါ် ကြွေကျတဲ့ ပန်းသီဆီ ရောက်…ရောက်နေတယ် ဒီမှာက နီရိုးတွေ စောင်းတီးကောင်းနေဆဲ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ဝေဒနာတွေကို ငါ ကြောက်တယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၆ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူး မီးခိုး တိမ်ခိုးများလို လေနှင်ရာ ရွေ့လျား သောကများနဲ့ ထွက်ခွာ ရေကြည်ရာ မျက်နုရာ။...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ခရီးသည် (၂) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ ဆောင်းဦးကာလရဲ့ မြူနှင်းတွေ ၀င်ရိုးစွန်းဒေသမှာ ယင်းထနေပုံများ မယုံနိုင်စရာ ငါ့အတွက်အသစ်ပါပဲ .. လမ်းမများဖြောင့်ဖြူး ကျယ်ဝန်း ကောက်ကွေ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – တရားမျှတမှုကိုသာ အမေတောင်းဆိုတယ်
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – တရားမျှတမှုကိုသာ အမေတောင်းဆိုတယ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄ ခြေထောက်တွေကို ခြေချင်းခတ်ခံရပီးတဲ့နောက် ထွက်သွားတဲ့ည ….. လက်တွေကို လက်ထိပ်ခတ်ခံရပီးတဲ့နောက် ထွက်သွားတဲ့ည ……. ပါးစပ်ပေါက်တွေကို အဓမ္မ ပိတ်ဆို...
သမိုင်းစစ်စစ်များအကြောင်း ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၄ Graphic Design Aung Htet ကြယ်ကြွေညများ အသက်မကုန်သရွေ့ ကြုံတွေ့ နေရဦးမယ် …။ ညဟာ …… တိတ်ဆိတ်သယောင် မာယာကျော့ကွင်းကိုထောင်လို...
နာဂစ်ရေ… နားနဲ့မနာ နှလုံးသားနဲ့နာတော်မူပါ ရဲရင့်သက်ဇွဲ မေ ၃၊ ၂၀၁၄ နာဂစ်ရေ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သိထားတောင်မှ ရှောင်ပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဘူး …. တကယ်တော့……. ကြိုတင်အသိပေးဘို့ဝတ္တရား...
သံမဏိလူသား ပြည်သူကြားမှာ ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၄ ဆို့ နင့်ကြေကွဲရပုံများ ဖော်ပြစရာစကားလုံး ဘယ်မှာရှာရမှာတုန်း အဘရဲ့ …. မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ခဲ့တယ် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးရဲ့ အားဟာ ပြည်သူကြားမှာသာရှိတယ်...
ပိတောက်နဲ့ အတာရေ ရင်ဘတ်တွေကို ဂျပ်ပင်ထိုးကြ ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၄ ဝေဒနာကို မကြေငြာတော့ပါဘူး ရနံ့နဲ့ ပိုး ဘယ်ဟာက အရင်လာသလဲ ဒီရာသီထဲမှာ ……. ရင်ခုန်သံတွေ...